Warqad Furan .. Madaxweyne Muuse Biixi ... Qore, Mohamed Ahmed Farah Mataan (Jaafaa)
Saturday July 10, 2021 - 11:24:18 in Articles by Hadhwanaag News
Waxii shucuur iyo qiiro aad uqabto dalkaaga iyo deegaankaaga wey kuu hayaan;
Waxanan u qalab qaataa wax akhris, wax qoris ama wax qabad.- Waa maxay wadaniyad, bal dib u jaleec hillinkii dheeraa ee xornimada iyo qaranimada Somaliland loo soo maray, sideese shacabkayga loogu beeri karaa geedka wadaniyada ay lahaayeen.
Mudane madaxweyne, xasuuso, magaalada burco, xasuuqii 20.12.84. lagu toogtey waxgarad kii, Somaliland.
Mudane madaxweyne, xasuuso, magaalada Muqdisho, xasuuqii, 18.07.89.
Waxaad damqasho iyo diirnax aad u hayso dadkaaga dalkaaga iyo duunyadiisaba wey kuu og yihiin.
Waxii wel wel iyo walaac kusoo food-saara, ama waxqabad, shacabkaaga iyo dalkaaguba wey kuu og yihiin, dhalinyarada u xidhan calamada ee ka soo jeeda Sool iyo Awdal, kuna xidhan qeyrul dastuuri, maxkamadna lana marin, degdeg haloo sii daayo. (Waa talo).